Ny Touch Bar an'ny MacBook Pro dia hampiseho ny bokotra fiasa raha mampiasa Windows | Vaovao IPhone
Ny Touch Bar an'ny MacBook Pro dia hampiseho ny bokotra fiasa raha mampiasa Windows isika
Nandritra ny fampisehoana ireo maodely MacBook Pro vaovao, nandinika manokana ny zava-baovao natolotry ny bara fitendry i Apple, efijery iray ahafahana mifanerasera amin'ny macOS Sierra. Betsaka ny rindranasa izay efa mifanentana amin'ity tontonana mikasika ity toy ny Office, Photoshop, Pixelmator, Final Cut ary Ny fampiharana tsikelikely dia havaozina mba hifanaraka amin'ny bara fitendry. Rehefa mitantana rindranasa izay tsy mifanaraka amin'ny bara fitendry isika, dia hasehony antsika ny lakilen'ny fiasa izay natolotry ny kitendry MacBook hatrizay.
Betsaka ny mpampiasa na eo aza ny fampiasana OS X tsy tapaka koa mila mampiasa Windows. Betsaka ny mpampiasa no manontany tena aorian'ny fampisehoana hoe inona no hitranga rehefa mametraka Windows amin'ny alàlan'ny Boot Camp amin'ity MacBook Pro ity isika, raha afaka mampiasa ny bara fitendry araka izay azontsika atao amin'ny OS X. Mpamaky MacRumors i Will dia nifandray tamin'i Craig Federighi mba hanandrana mitady vahaolana amin'izany olana izany.
Federighi, el del pellazo, izay nipoitra tamin'ny lahateny fototra ho an'ny MacBook Pro vaovao dia namaly ity mpampiasa ity izay nilaza fa ny asan'ny lakileny hiseho ao amin'ny bara fitendry hitovy amin'ny an'ny MacBook Pro izy ireo mandra-pahatongan'ny fotoana fanavaozana azy, izany hoe ny lakilen'ny fiasa, izay matetika ampiasaina amin'ny Windows koa, anisan'izany ny lakilen'ny Esc.
Ny tsy nohazavain'i Craig tamin'ny valinteniny dia na ny fanaraha-maso ny famerenana, ny famirapiratana ary ny feo dia mbola ho hita ihany. Tsikelikely dia nesorina ireo fisalasalana natsangan'ny biraom-pifandraisana an'ny MacBook Pro vaovao, fisalasalana lojika raha oharina amin'ny omaly tsy misy solosaina hafa, na PC na Mac dia tsy nanana an'io karazana efijery io hampitomboana ny vokatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Ny Touch Bar an'ny MacBook Pro dia hampiseho ny bokotra fiasa raha mampiasa Windows isika
IOS 5 Clown Mandrakizay dia hoy izy:
Mahaliana. Tsy mbola namaky azy io tamin'ny bilaogy hafa tamin'ny Espaniôla aho.
Valio ny IOS 5 Clown Mandrakizay
Ahoana ny fampidinana ny horonan-tsarinao rehetra alohan'ny hanjavonan'i Vine
WhatsApp dia nohavaozina ary ankehitriny mamela anao handefa sary mivantana ho toy ny horonan-tsary